Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zasePoland » IPoland ilungiselela ukubhengeza icandelo layo lezokhenketho
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Iindaba zasePoland • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
IPoland ijika ibe yindawo efanelekileyo kwabo bahambi batsha bangakhange bakwazi ukufumana ukuhamba bodwa iminyaka emibini.
IPoland yindawo yokujikeleza unyaka wonke enika uluhlu lwamava amangalisayo kunye nexabiso elingenakoyiswa xa kuthelekiswa nabalingani baseYurophu.
Ngaphezulu kweeprojekthi ezingama-62 zehotele ezicwangcisiweyo kwaye ezingama-35 ngenxa yokuvulwa ngokusesikweni ngo-2021, iPoland ibeka phambili ekunyuseni ukukhula kwayo kwezokhenketho kwixesha lasemva kobhubhane.
Iidolophu zasePoland zidibanisa ngokugqibeleleyo iindawo ezidolophini kunye neendawo eziluhlaza zendalo, kwaye akukho sixeko senza oku ngcono kuneWarsaw.
Ngesibhengezo sokuba inkqubo yokukhanya kwetrafikhi yamanye amazwe iyenziwa lula eNgilane ngoludwe olunye olubomvu oluqala ngo-Okthobha wesine, iiholide ukuya ePoland, enye yezona ndawo zibalaseleyo zaseYurophu kubakhenkethi abancinci, zibuyile.
Ukuqala ukusebenza nge-4 ka-Okthobha, isibhengezo sithetha abantu ababuyayo Pholend akusayi kuphinda kuhlaliswe yedwa ehotele, ukuba ilizwe alihlali kuluhlu olubomvu. Uvavanyo lwe-PCR alusayi kuphinda lube yimfuneko kubahambi abagonywe ngokupheleleyo ababuyela eNgilane, kwaye phantsi kolawulo olutsha lokuvavanya, abantu abanemisebenzi yomibini abayidingi ukwenza uvavanyo lwangaphambi kokuhamba ngaphambi kokuba bashiye naliphi na ilizwe elingekho kuluhlu olubomvu.
Ukusuka kunxweme lwaseBaltic oluqhelekileyo kunye neelwandle zalo ezimhlophe ezinesanti emhlophe UNESCO-amahlathi akhuselweyo kunye ne-titanic Tatra ezintabeni kubutyebi bezixeko ezigcwele imbali, iindawo eziluhlaza kunye nelifa lemveli elityebileyo, Pholend yindawo ejikeleze unyaka wonke enika uluhlu lwamava amangalisayo kunye nexabiso elingenakoyiswa xa kuthelekiswa nabalingani baseYurophu. Ezi zinto zenza iPoland ibe yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bahambi baselula bangakhange bakwazi ukufumana ukuhamba bodwa iminyaka emibini.
Ngaphezulu kweeprojekthi ezingama-62 zehotele ezicwangcisiweyo kunye nama-35 ngenxa yokuvulwa ngokusesikweni ngo-2021, ukuzisa amagumbi amatsha angama-7,422 PholendIlizwe libeka phambili ekunyuseni ukukhula kwalo kwezokhenketho emva kwesifo. Ukusuka edolophini ukuya kukhenketho lwasemaphandleni, nge-Julayi, i-UNESCO ibhengeze ukuba amaHlathi akudala kunye ne-Primeval beech Amahlathi asePoland anikwe iwonga leLifa leMveli leHlabathi. Amahlathi amandulo aseCarparthi ahamba kumazwe aliqela, kwaye icandelo lasePoland lelinye iphondo leBieszczady National Park.
Eyona ndawo ingcono yaseYurophu yokuPhumla kwabaKhenkethi abancinci
Zigxilise eKrakow, ikomkhulu lenkcubeko lasePoland
IKrakow ivela njengenye yeedolophu eziphambili zaseYurophu zokuphumla, kwaye ngesizathu esihle. Isixeko sinomnombo weLifa leMveli leHlabathi, kunye ne-Old Town, iWawel Castle kunye nesithili saseKazimierz bonke abaluhlu lwe-UNESCO lweLifa leMveli lehlabathi. IKrakow ikwangumbuso weNkcubeko waseYurophu, kunye neminyhadala engaphezulu kwe-100 kunye neziganeko zenkcubeko eyaziwayo kwihlabathi ezenzeka apha minyaka le. Uyakufumana ikota yokuqokelelwa kwePoland yonke imyuziyam edolophini. Njengokuba ezi ndumasi zidumileyo bezingonelanga ukukulukuhla, isixeko ikwayinkunzi yaseYurophu yeNkcubeko ye-Gastronomic. Uya kufumana iindawo zokutyela ezingama-26 eziphethe ukwahlulwa kweMichelin apha, kwaye phantse kabini bazukisiwe yiGault & Millau. Ukusuka kwimveliso ekumgangatho ophezulu ukuya kubapheki abaziwayo kwihlabathi liphela, isitayile seKrakow's foodie sisityebi kwaye sahlukile.